Travel to Hawaii without restrictions for visitors | eTurboNews | Isbeddellada | Wararka Safarka ee khadka tooska ah
U safrid Hawaii iyadoon xaddidnayn booqdayaasha
Hawaii waxaa loo yaqaanaa Aloha Gobol. Waxay tusaale u ahayd adduunka markay tahay nabadgelyada dhammaan fiditaanka COVID-19.
Dowladdu waxay ku howlan tahay sameynta Aloha Gobolka ayaa heli kara dhammaan booqdayaasha marka boqolkiiba 70 dadka deggan oo dhan la tallaalo. Tani waxay noqon kartaa toddobaadyo uun. Dhanka kale, xayiraadaha kale ee safarka waa laga qaadi doonaa Juun 15.
Xilligan in ka badan boqolkiiba 50 dhammaan dadka deggan Hawaii ayaa si buuxda loo tallaalay.
Laga bilaabo Juun 15, safarka interisland waxaa la heli doonaa iyada oo aan xaddidneyn.
Hawaii waxay u dhaqaaqi doontaa socdaal aan xadidnayn oo qof walba u socda.
Gudoomiyaha Hawaii David Ige ayaa maanta ku dhawaaqay “Safarka Safarka ah” ee xaddidaya safarka Aloha Gobolka waa laga takhalusi doonaa, mar 70 boqolkiiba qof kasta oo deggan Hawaii si buuxda ayaa loo tallaalaa. Waqtigaan, in kabadan boqolkiiba 50 ayaa lagu talaalay Hawaii.
Marka boqolkiiba 70 dadka deegaanka oo dhan la tallaalo, dhammaan shuruudaha maaskaro-xirnaanta oo ay ku jiraan kuwa gudaha ayaa la qaadi doonaa.
Laga bilaabo Juun 15, safarka jasiiradaha dhexdooda waxaa laga heli doonaa iyada oo aan xaddidnayn.
Mar haddii boqolkiiba 55 dhammaan dadka deggan Hawaii la tallaalo, dadka deggan tallaalka noocan ah waxay awoodi doonaan inay u safraan gobollada kale ee Mareykanka iyo dhulal oo ay ku noqdaan Hawaii iyadoon wax baaritaan dheeraad ah la sameyn. Tan waxaa sidoo kale la filayaa inay bilaabato Juun 15, 2021.
Marka boqolkiiba 60 dhammaan dadka deggan Hawaii la tallaalo, qof walba, oo ay ku jiraan dalxiisayaasha, ee si buuxda loo tallaalay waxay u safri karaan Hawaii iyadoon wax baaritaan dheeraad ah la sameyn.
Marka 70 boqolkiiba dhammaan dadka deggan Hawaii la tallaalo, dhammaan xayiraadaha safarka ee gobolka ayaa la qaadi doonaa, furitaanka Aloha Mar labaad u sheeg safarka iyo dalxiiska sidii uu ahaa ka hor cudurkan.
Guddoomiyaha Hawaii wuxuu ku dhawaaqay makhaayado badan oo maxalliga ah iyo ganacsatada inay siin doonaan qiimayaal gaar ah martida la tallaalay inta lagu jiro bisha Juun.
Guddoomiye Cige, si kastaba ha ahaatee, wuxuu ka digay in xorriyadda noocaas ah la xaddido haddii masiibada ay ku timaado si lama filaan ah.
Diyaaradda Hawaiian waxay ku deeqi doontaa 1 milyan oo mayl si loogu abaalmariyo qof nasiib u leh oo ka tallaalaya gobolka.
Qaadista xayiraadaha waxay khuseysaa oo kaliya safarada gudaha ee Mareykanka.